Ogaden News Agency (ONA) – Saraakiil Lashaqaynayay Taliska Wayaanaha ee TPLF oo Kacdoonka Kubiiray.
Saraakiil Lashaqaynayay Taliska Wayaanaha ee TPLF oo Kacdoonka Kubiiray.
Wararka naga soo gaadhaya Gobolka Axmaarada ayaa sheegaya in ay dibad baxayaasha kubiireen qaar kamid ah mas’uuliyiintii ay kooxda TPLF u dhiibatay shaqooyinka.
Sida xogta aan ku helayno gudoomiyihii Dagmada Dinbiya ee galbeedaka Gobolka Gonder iyo Xoghayihii Xisbiga lagu magacaabo ANDM ee isbahaysiga la ah xisbiga EPRDF ayaa lasheegayaa in ay ku biireen kacdoon wadayaasha Qawmiyada Axmaarada. Saraakiishan oo u shaqayn jiray kooxda TPLF ayaa kasoo horjeedsaday gumaadka shacabka waxayna sheegeen in ay hogaamin doonaan shacabka kacdoonka wada.
Ma aha markii ugu horaysay ee ay goostaan xubno gumaysiga lashaqayn jiray waxaana xasuusanahay in ay kacdoon wadayaasha kubiireen xubno shaqooyin muhiim ah u hayay kooxda TPLF ee ka arimin jirtay Itoobiya.
Hogaamiye yaasha dadka kacdoonka kawada ee Gobolada Axmaarada iyo Oromada ayaa xubnaha Wayaanaha lashaqeeya ugu baaqay in ay iskaga soo baxaan fal dambiyeedka ay kujiraan inta ay goori goor tahay waxayna intaas kudareen in lacafin doono qofkii faraha kala baxa gumaadka shacabka.
Dhinaca kale waxaa dhamaan Gobolka Axmaarada kusii fidaya wajigii cusbaa ee mudaharaadka oo ahaa in aan magaalada loosoo bixin isla markaana laxidho dhamaan ganacsiga iyo waxbarashada si go’doon looga dhigo ciidanka gumaysiga, sidoo kale waxaa jira gacan kahadal kadhacay meelo katirsan Gobolka xabashida ee dhibaatooyinku halakeeyeen.